छ्याप–छ्याप्ती बिहेका विज्ञापन, सम्पत्तिको अफर ! - Namaste Times
मंगलबार, चैत्र ०५, २०७५ | Friday, June 8, 2018
छ्याप–छ्याप्ती बिहेका विज्ञापन, सम्पत्तिको अफर !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २५, २०७५ समय: १४:३८:४८
काठमाडौं- सृजना नामकी ३५ बर्षिया अँधवैंशे युवतीले बिहेका लागि केटो चाहिएको भन्दै उमेर र आम्दानीका स्रोत खुलाएर पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गरेकी थिइन् । एक चलेको दैनिक पत्रिकाको वर्गिकृत विज्ञापनमा उनको सम्पर्क नम्बर पनि थियो । र अफर थियो– काठमाडौंको कुनै ठाउँमा १ रोपनी जग्गामा बनेको घर र नगद एक करोड समेत चलाउन पाउने ।
अमेरिकामा बस्ने एक ३२ वर्षिय युवक जो मेडिकलमा पिएचडी गर्दैछन्, उनलाई २४ बर्षसम्मकी युवती बिहेका लागि चाहिएको छ । कम्तिमा ५ फिट २ इन्च उचाई भएकी बीबीए, बीएसी वा बीएसम्म अध्ययन गरेकी हुनुपर्ने अफर छ । सम्पर्क नम्बरसहित राखिएको विज्ञापनमा युवकको नाम खुलाइएको छैन ।
बढ्दो सहरीकरण र सम्बन्धका आयामहरू परिवर्तन हुन थालेपछि विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि बिहेका लागि विज्ञापन गर्ने चलन बढ्न थालेको छ । परिवारका सम्पर्कसुत्र मार्फत हुने बिहे अहिले च्याउ उम्रेजसरी खुलेका ‘म्यारिज ब्युरो’का नाममा व्यावसायीक हुन थालेको छ । व्युरोहरूमार्फत नै यसरी पत्रपत्रिकामा विज्ञापन हुने गरेको छ ।
बेरोजगारी र घरपरिवारबाट दिक्क भएर हुनुपर्छ एक युवाले घरज्वार्इँ नै बस्नेगरी बिहे गर्छु भनी पत्रिकामा सम्पर्क नम्बर छाडेका छन् । उनले घरज्वाई बस्नेगरी बिहे गर्ने भनी युवतीलाई सम्पर्क गर्न सकिने पनि उल्लेख गरेका छन् ।
सिक्किमकी एक युवतीको तस्बिरसहित बिहेका लागि इन्टरनेटमा विज्ञापन गरिएको छ । उनकी एक छोरी पनि छन् । सादी डटकममा राखिएकी नेपालीभाषी युवतीले विज्ञापनमा आफ्नी छोरी अध्ययनमा अब्बल रहेको भनी खुलाएकी छन् । चार सदस्य परिवारमा रहेको उल्लेख गरेकी उनले आफुसँग बस्नसक्ने युवकको चाहना राखेकी छन् ।
जीवनको उत्तरार्धको यात्रा लागेपछि जीवनसाथीको खोजी हुनु नयाँ कुरा हुन छाडेको छ । खासगरी विदेशी भुमिमा बस्ने महिला र पुरुषले मनमिल्ने जोडी, प्रेमी नपाउँदा, व्यस्त भई प्रेमका लागि समय निकाल्न नपाउँदा यसरी विज्ञापनमार्फत बिहेको प्रस्ताव गर्न थालेका छन् । सिक्किममा दुई पार्लर आफ्नै रहेको विवरण देखाएकी ३७ वर्षिया महिलाले ‘दुख सुखमा साथ दिने, माया गर्ने हेरचाह गर्ने’ पुरुषसँग बिहेको इच्छा राखेकी छन् । उनले विज्ञापनै गरेर यो विवरण राखेकी हुन् । नेपालीभाषी ति महिला नेपालीसँग बिहे गर्ने रहर राख्छिन् ।
समाजशास्त्रीहरूका अनुसार यो नौलो काम भने होइन । युरोप र अमेरिकाको व्यस्त जीवनमा हुर्किएका महिला र पुरुषले यसरी विज्ञापन गरी राम्रो सम्बन्ध कायम राखेर बसेका छन् । यही शैली भारत हुँदै नेपालसम्म पनि भित्रिएको हो ।
सहरी जीवनमा व्यस्त हुने व्यावसायीक, उच्च ओहदामा काम गर्ने महिला पुरुष सम्बन्ध कायम गर्न समयमा चुकेका कारण विज्ञापनमार्फत नै जोडी बाँध्न चहान्छन् र म्यारिज ब्युरोको सुविधा खोज्छन् । कतिपय त दुई चार वटा घर विग्रिएपछि सम्पत्तिको लोभ देखाएर पनि सम्बन्ध कायम राख्ने सपना बुनेका हुन्छन् ।
‘हामीलाई यस्ता विज्ञापन विभिन्न म्यारिज व्युरो र कतिपय युवा युवतीले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा आफैं पनि दिने गरेका छन्’, एक दैनिक पत्रिकाका बजार व्यवस्थापक भन्छन्,‘कतिपय विज्ञापन एजेन्सीमार्फत पनि आउने गरेका छन् । साँच्चै हुन् कि झुठ भनेर हामी खोज्दैनौं । सम्पर्क नम्बर भएका कारणले सहरको बनोटअनुसार यस्तो विज्ञापन विश्वव्यापी रुपमा चल्ने गरेको छ ।’